तथ्यांक भन्छ- संक्रमण समुदायस्तरमै विस्तार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
तथ्यांक भन्छ- संक्रमण समुदायस्तरमै विस्तार
एक साताको औसत पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट काठमाडौं उपत्यकाको ११.७० छ भने देशभरको औसत ८.७ छ । यसले संक्रमण समुदायस्तरमा व्यापक भएको वा परीक्षणको दायरा अझै फराकिलो हुन नसकेको दर्शाउँछ ।
भाद्र २०, २०७७ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — पछिल्ला तथ्यांकहरूले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै विस्तार भइसकेको देखाएका छन् । पछिल्लो सात दिनको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट (पीपीआर) बिहीबार गणना गरेर हेर्दा उपत्यकाको औसत ११.७० को हाराहारीमा छ भने देशभरको औसत ८.७ छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार पीपीआर ५ भन्दा माथि भए त्यसले संक्रमण समुदायस्तरमा व्यापक भएको वा परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन नसकेको दर्शाउँछ ।
उपत्यकाको पछिल्ला सात दिनको पीपीआर एक दिनबाहेक दोहोरो अंकमा छ जुन आवश्यक मापदण्डभन्दा दुई गुणा बढी हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका देशहरूलाई जनजीवन सामान्य रूपमा फर्काउनुपूर्व १४ दिनसम्म पीपीआर ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यो संख्या बढ्नुको मतलब हामीकहाँ लक्षण देखिएर वा कुनै समस्या भएर परीक्षण गराउन पुगेकाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ, समुदायस्तरमा परीक्षण भएको छैन भन्ने पनि हो । एकातर्फ देशैभर संक्रमण फैलने दर उकालो लाग्दै छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या भदौ १४ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा १४ दिनमा दोब्बर भएको छ ।
उपत्यकामा पछिल्लो दुई साताको तथ्यांक केलाउँदा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुने दिन घट्दै गएको छ । बिहीबारको तथ्यांकअनुसार करिब ९ दिनमा उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने देखिन्छ ।
देशभर संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय पनि घट्दै गएको छ । दोब्बर हुन लाग्ने समय जति घट्दै गयो, संक्रमण उति तीव्र भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।
पछिल्लो दुई सातामा उपत्यकाको संक्रमण दोब्बर हुने दर ।स्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय
साउन ६ गते लकडाउन अन्त्य भएको दिन देशभर संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुने दर ८२.५ थियो । जसको मतलब करिब ८२ दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन्छ भन्ने अनुमान हो । तर, त्यो गणितीय अनुमानलाई धेरै पछि छोड्दै करिब ४० दिनमै संक्रमितको संख्या दोब्बर भयो । तथ्यांक विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट स्टाटिस्टा डटकममा भदौ १५ मा प्रकाशित रिपोर्टमा भदौ १४ गतेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन ३४ दिन लागेको थियो । जबकि सोही रिपोर्टका अनुसार विश्वमा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन ५० दिन लागेको देखिन्छ ।
भदौ १६ गतेसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा अबको अवस्थामा संक्रमितहरूको संख्या दोब्बर हुन करिब २६ दिन लाग्न सक्छ । हाल धेरै संक्रमित देखिएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा भए पनि संक्रमित हुने क्रम घटेको छैन ।
यी सबैभन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति मृत्युको हो । स्टाटिस्टा डटकममै भदौ १५ गते प्रकाशित अर्को एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भदौ १४ गतेको तथ्यांकअनुसार १४ दिनमै दोब्बर भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल जोखिमको हिसाबले नवौं स्थानमा पर्छ । सबैभन्दा माथि बोत्सवाना रहेको छ, जहाँ ४ दिनमा मृतकको संख्या दोब्बर भएको थियो । विश्वमा मृतकको संख्या दोब्बर हुने औसत दिन ७९ छ । सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको चीनमा मृतकको संख्या दोब्बर हुन १९० दिन लागेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विज्ञ भन्छन्– अंकलाई हेरेर तयारी गरौं
जोन हप्किन्स हेल्थ सिस्टममा कार्यरत क्वालिटी म्यानेजर तथा चिकित्सकीय एनालाइटिक्स विज्ञ डा. विशाल भण्डारीका अनुसार अंकहरूले देखाएको परिदृश्यलाई बदल्ने हो भने सोहीअनुरूप योजनाहरू बनाउनुपर्छ । ‘भदौ १६ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा संक्रमितको संख्या नेपालमा दोब्बर हुन २६ दिन लाग्ने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ९ दिनमा यो संख्या दोब्बर हुने देखिन्छ । त्यो भनेको अहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो भने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरी काम गरियो भने त्यो अनुमानमा पनि फरक पर्छ ।’
डा. भण्डारीका अनुसार अंकका आधारमा गरिने विश्लेषणले भविष्यमा आइपर्न सक्ने स्थितिको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुग्छ र सोहीअनुसार तयारी गरे गम्भीर अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । ‘त्यसका लागि हामीले के–के तयारी गर्नुपर्छ भनेर अहिले नै योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने दरले पूर्वतयारीका लागि केही समय प्रदान गर्नुका साथै अस्पतालहरूलाई बेड तथा अन्य आवश्यक सामग्री तयार गर्नका लागि पनि समय दिन्छ ।
यस्तै विज्ञान विषयका अध्येता दोर्जे गुरुङका अनुसार नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा संक्रमण तीव्र रूपमा समुदायस्तरमा फैलिन थालेको हो कि भन्ने देखाउँछ । ‘नेपालको पीपीआर निकै माथि छ र बढ्दै गइरहेको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने, ‘पीपीआरको रेटसँगै परीक्षणको दर पनि बढिरहेकाले यो थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार पीपीआर मात्रै बढेको तर परीक्षणको दायरा भने एकनास रहेको भए संक्रमित नबढीकन परीक्षण नपुगेकाले हो भन्न मिल्थ्यो र परीक्षणको दर बढाउनेबित्तिकै अंक सामान्य अवस्थामा आउँछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । तर, पीपीआर र परीक्षणको दर समान रूपले उकालो लाग्नु भनेको समुदायस्तरमा संक्रमण पुगिसकेको संकेत हो ।
यी हुन् उपत्यकाका हटस्पट
उपत्यकाको पीपीआर ११ भन्दा बढी र देशकै पीपीआर ९ को हाराहारी हुनुले समुदायमा संक्रमण रहेको मान्न सकिने जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपाने पनि बताउँछन् । ‘यो ठोकुवा गर्न त मिल्दैन तर समुदायमा संक्रमण नभईकन यति धेरै अंक आउँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई थप पुष्टि गर्नका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनुपर्छ र परीक्षणको दर अझै बढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सबै जनाले घरबाहिर निस्किँदा मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नेजस्ता रोकथामका आधारभूत नियम पालना गरे धेरै हदसम्म अंकगणितको भविष्यवाणीलाई पर धकेल्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने मुलुक र समुदायमा संक्रमण गइनसकेको बताए । ‘देशभर नै समुदायस्तरमा संक्रमण छ भन्ने अहिले देखिँदैन तर केही जिल्लामा भने समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको छ भन्न सकिन्छ,’ शुक्रबार स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले छिट्टै सेरोप्रिभेलेन्स टेस्ट पनि गर्न लागेका छौं । त्यसबाट पनि अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ ०६:४१
देउवाद्वारा मनोनयन जारी
भाद्र २०, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको आचारसंहिता र विधानविपरीत गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरू खारेज गर्न माग गरिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई दिनमा थप ९६ जनालाई मनोनयन गरेका छन् ।
सभापति देउवाले एनपी सावद प्रमुख रहेको शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग र पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहेको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म २० वटा विभागमा करिब ९ सय स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुक मनोनयन भएका छन् । पद बाँडेर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै पौडेल पक्षले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । उसले पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भइसकेपछि विधानको प्रावधानसमेत ख्याल नगरी गठन भएका विभागहरूको मनोनयन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै त्यसो नगरे धर्ना र अनशनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
पार्टी विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभागसहित पार्टीका समितिहरू गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देउवाले चार वर्षको कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेपछि विभाग गठन गरेका हुन् । अघिल्लो विधानमा त दुई महिनाभित्रै गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
देउवाले भने पौडेल पक्षको विरोधको बाबजुद थप विभागसमेत गठन गर्ने तयारीमा छन् । देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उनी विजयकुमार गच्छदारको समूहलाई दिने ३ सहित करिब ९ वटा विभाग गठनको तयारीमा जुटेका हुन् । ‘पौडेल पक्षका लागि ४० प्रतिशत संख्यामा विभाग खाली छाडेर अरू गठन गर्ने तयारीमा सभापतिजी हुनुहुन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘गच्छदार समूहलाई दिने भनिएका तीन वटा विभाग अब चाँडै गठन हुनेछन् ।’ विभागका सदस्यमा समेत ४० प्रतिशत खाली छाड्ने मापदण्ड बनाइएको थियो । विधानअनुसार एउटा विभागमा ५० जना मनोनयन गर्न पाइन्छ । तर पछिल्ला दुई विभागमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गरिएको छ । ‘पौडेल पक्षबाट सहभागिता नै नहुने निश्चित भएपछि कति कुर्ने भनेर पूर्णता दिन लागिएको हो,’ शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागका प्रमुख सावदले भने ।
कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिलाई जोड्नकै लागि देउवाले पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको २८ वटा विभागलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट बढाएर ४७ वटा पुर्‍याएका थिए । ४० प्रतिशतले हुन आउने १८ जति विभाग खाली राखेर अन्य गठन गर्ने तयारीमा उनी जुटेका छन् ।
देउवाले शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको उप्रमुखमा लमजुङका विष्णु धिताल, सचिवमा दोलखाकी विनिता अधिकारीलाई मनोनयन गरेका छन् । सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको उपप्रमुखमा पत्रकार सुरेश आचार्य र सचिवमा दिनेश थापालाई मनोनयन गरेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ ०६:३९
हिजोको छलफलमा केही आश लागेको थियो, आज त्यो पनि बाँकी रहेन : माधव नेपाल